Yusuf Garaad: October 2015
Xabsiga Dhexe ee Xamar - 29 Okt 2015
Posted by Yusuf Garaad at 14:01:00
Haweenka Soomaaliyeed waxay la tiro eg yihiin ragga, haddaysanba ka badneyn. Haddana waxay fursadaha siyaasadda mar kasta ay uga marti yihiin ragga. Maanta waxaa Xamar ka furmay wadatashi ku aaddan aayaha dalka. Bal qiyaas tirada haweenka cod leh ee shirkaa fadhida.
Maxaa keenay in haweenku ay ragga uun u daba fadhiyaan maslaxadda dalka? Miyaan iyaga waajib ka saarneyn nabadeynta, hoggaaminta iyo horumarinta dalka? Miyeyse ka xuquuq yar yihiin ragga? Dalkuse ma ka maarnaa dadkiisa barkiis in aanay talada wax ku lahaan?
Dabcan waan ka warqabaa kaalinta muhiimka ah ee qoyska, bulshada, ganacsiga iyo waxbarashada iyo dhinacyo kale ay ku leeyihiin gabdhuhu, waxaanse halkan uga hadlayaa kaalintooda siyaasadda.
Weliba waxaan ka warqabnaa in gabdhuhu ay waayadan dambe, siiba xagga qurbaha, ay waxbarashada uga wanaagsan yihiin ragga? Waxaan ognahay in ay soo baxeen gabdho aqoon wanaagsan, waxqabad wanaagsan, arrimaha dalkana khibrad u leh, qaarkoodna ay shaqooyin wanaagsan dalka ka hayaan.
2012 waxay ballantu ahayd in kuraasta Baarlamaanka 30% ay haweenku lahaadaan. Saamigaas oo markii horeba aan caddaalad ku saleysnayn, xataa isagii lama fulin. Hadda 2016 maxaa dhici doona? Maxay gabdhuhu ku dhaqaaqeen si ay markaan xuquuqdooda u qaataan? Mise waxay rajo ka qabaan in raggu uu intii hore dhaami doono, oo markaan uu dib uga degi doono?
Qormadaan kooban waxaan ugu talo galay bal in gabdhaha iyo wiilashuba Soomaaliyeed ay is weydiiyaan su’aalo la xiriira kaalinta haweenka ee qaabeynta, meelmarinta iyo hagidda siyaasadda dalka.
Haddii aad ila qabto in haweenka ay tahay in ay dadaalkooda kor u qaadaan, maxay kula tahay sida ugu habboon ee ay isu abaabuli karaan si ay doorkooda u dhacsadaan, kaalintoodana ay u buuxiyaan?
Posted by Yusuf Garaad at 15:24:00